NgoLwesibini, Februwari 6, 2007 Douglas Karr
Oku kubhalwe kwi Problogger kwaye kuhle kakhulu.
Ukuba awuyiboni ividiyo, ungandwendwela indawo: I-KSU, ubuGcisa beDijithali
Wow, le yinkcazo yevidiyo ebalaseleyo yeWeb 2.0. Wenze kakuhle kakhulu, unjingalwazi!
Kwenzeka njalo mna thunyelwe eyam "inkcazo" yeWeb 2.0 namhlanje (ngaphambi kokuba ndibone le vidiyo). Ngokuqinisekileyo ndiyavuma ukuba iWeb 2.0 imalunga nokudibanisa abantu, kodwa iya ngaphaya koko. Kukwenziwa kwedemokhrasi kwi-Intanethi.